राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री कोइराला र संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङबीच भेटवार्ता - NewsPolar NewsPolar
राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री कोइराला र संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङबीच भेटवार्ता
२९ भाद्र २०७२, मंगलवार ०४:३२
काठमाडौं, भदौ २९ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आगामी असोज ३ गते संविधानसभा भवनमा हुने विशेष समारोहका लागि औपचारिक निम्तो दिएका छन् ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङ मंगलबार बिहान शीतल निवास पुगेर नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपति यादवलाई निम्तो दिएका हुन् ।
असोज ३ गते संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा विशेष समारोहकाबीच नयाँ संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम संविधानसभा सचिवालयले तय गरिसकेको छ ।
राष्ट्रपति यादवले निम्तोबारे छिट्टै औपचारिक जानकारी दिने बताएको सभाध्यक्ष नेम्वाङले जानकारी दिए ।
संविधानसभामा अहिले संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारामाथि दफावार मतदान गर्दै पारित गर्ने कार्य भइरहेको छ । संविधानसभामा सभासदहरुको मतका आधारमा नयाँ संविधानको सबै धारा पारित गरिसकेपछि सबै सभासदहरुले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने छन् ।
संविधानको नियमावली अनुसार सबै सभासदहरुको हस्ताक्षरपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानलाई प्रमाणीकरण गर्ने छन् भने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नयाँ संविधान लागू भएको घोषणा गर्ने छन् ।
त्यसैगरी मंगलबार नै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसँग भेटवार्ता गरेका छन् । राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच बिहान राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा भेटवार्ता भएको हो ।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान लेखनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र जारी संविधान लेखन प्रक्रियामा राजनीतिक दललाई सहभागी गराउन गरिएको प्रयासहरुबारे जानकारी गराएका थिए । भेटपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने सुनिश्चित भइसकेकाले अब कुनै शङ्का नगर्न सबैसँग आग्रह गरेका थिए ।